Chief Engineer for Authentic Group | Job in Myanmar
•	MD မှညွှန်ကြားသော Project အတွက်လိုအပ်သည့် Presentation များပြင်ဆင်နိုင်ရမည်။
•	ဌာနဆိုင်ရာသို့လိုအပ်သော Presentation ပြုလုပ်ပေးရမည်။
•	Project အလိုက် Drawing များအား Designer များ နှင့်ညှိုနှိုင်းပြီး MDထံသို့တင်ပြနိုင်ရမည်။MD ညွှန်ကြားချက်ပေါ်မူတည်ပြီး Archie, Structure, M&E များအတည်ပြု ရေးဆြွဲ့ပီး Account မှတဆင့် သက်ဆိုင်ရာSite သို့ပေးပို့ပေးနိုင်ရမည်။
•	လုပ်ငန်းအကြီး၊ အသေးပေါ်မူတည်ပြီး Account မှတင်ပြသော Contract များအားရွေးချယ်အတည်ပြုပြီး MDသို့အတည်ပြုချက်တောင်းခံရမည်။လုပ်ငန်းအမျိုးအစားပေါ်ပြီး အသုံးပြုမည့် Meterials များအားစီစစ်ရွှေးချယ်ပြီး MDသို့တင်ပြအတည်ပြု ဆုံးဖြတ်နိုင်ရမည်။
•	လုပ်ငန်းမစတင်မှီ Project အလိုက် Survey Dataများအားစီစစ်ပြီး Design Section အားညွှန်ကြားနိုင်ရမည်။
•	Project များသို့ပစ္စည်းရောက်ရှိမှု၊ (အချိန်မှီပြီးစီးမှု) များအား ACE(or)ကိုယ်တိုင်သွားရောက်စစ်ဆေးခြင်း၊ ပစ္စည်းအမျိုးအစားများအရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း၊ Site အခက်အခဲများအားဖြေရှင်းပေးနိုင်ရမည်။
•	Permit Drawing နှင့်ပတ်သက်သောလုပ်ထုံး၊ လုပ်နည်းများနှင့် Drawings, Document များ၊ တောင်းခံလာသောပစ္စည်းစာရင်းနှင့် အမျိုးအစားများ၊ ငွေBill များအား Final အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်ရမည်။
•	အသက်(၄၀ နှင့် ၅၀)ကြားဖြစ်ရမည်။
•	အထက်မြင့်အဆောက်အဦ အတွက်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁၅)နှစ်ရှိရမည်။
•	သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ နှစ်(၂၀)အထက်ရှိရမည်။
•	Computer, Design, Photoshop, Project Schedule, Excle, Auto CAD များရ ရမည်။
•	English စကားပြော/ အရေးအသား ကျွမ်းကျင်မှုရှိရမည်။
•	လုပ်ငန်းအပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုရှိရမည်။ အချိန်ကာလကြာရှည်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။
•	အဆောက်အဦ တွက်ချက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ကျွမ ...
•	To ensure legal requirement and health and safety management system (ISO45001)are well established, implement and ma ...
•	Manage warehouse employees and overall daily operations •	Strong in warehousing management •	Maintaining docum ...
•	Accounting ပိုင်းကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာလုပ်ကိ ...
•	Monthly Report, Weekly Report များပြင်ဆင်ရမည်။ •	Site များတွင် Vi ...
•	ယာဉ်/ ယန္တရားအကြောင်း နားလည်ပြီး လက်အောက်ခ� ...
•	Construction Store Manager အဖြစ်အနည်းဆုံး (၈) နှစ် အထက်ဖြစ်ရ ...
•	Construction Team တစ်ခုလုံး၏ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး၊ ...
•	Coordinate internal resources and third parties/vendors for the flawless execution of projects •	Ensure that all ...
•	Pipe Fitting Installation များ၊ Pressure Test လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက ...
•	(Civil, Mechanical, Electrical, Water Supply) ပစ္စည်းများအကြောင်း နားလည ...
•	ဆောက်လုပ်ရေးနယ်ပယ် Marketing အတွေ့အကြုံရှိသူဖြ ...
•	အဆောက်အဦ ၊ လမ်းတံတား ၊ ရေပေးရေးလုပ်ငန်းမ� ...
•	Finishing နှင့် တွင်းအပြင် အလှအပများ စစ်ဆေးရမည်� ...
•	Well Control vehicle, Fuel and other Admin related job. •	Arrange applying VISAS,Licences,Tickets,Hotel and hirin ...
•	MD မှညွှန်ကြားသော Project အတွက်လိုအပ်သည့် Presentation မျ ...
•	Porject Team တစ်ခုလုံးအား စီမံအုပ်ချုပ်ဦးဆောင်န ...
•	Sub-Contractor / Client နှင့်ပတ်သက်သော စာရွက်စာတမ်းများ� ...
•	Drawing, Bills, Demands, Contractors များအားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရ� ...
•	Make prepare the office administration work in daily. •	Able to work withateam and good communication skill. � ...
•	Estimate quantity and costs of materials. •	Tender analysis and drawing. •	Prepare contracts and documents. � ...
•	Construction materials များနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှု ရ� ...
•	(Civil, Mechanical, Electrical water Supply) ပစ္စည်းများ အကြောင်းနားလည� ...
•	Pump နှင့် Pipe Line ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနိုင်ခြင်း၊ Pump/Valv ...
Date Posted: 16/6/2019
•	Electrical Controller ပိုင်းဆိုင်ရာ များနားလည်ပြီး Instrumenta ...
•	Construction Site အတွက် Safety နှင့် လုံခြုံရေးအပိုင်းတွ� ...
•	Factory Expenses Data entry to Peachrteer software. •	Journal entries to Peachtree software. •	Checking invoic ...
•	စက်ယန္တရားများ၊ စက်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သတ် ...
•	Data Collection of the topographic survey. •	Use computer-aided design to create design and specifications. •	...
•	Auto CAD Civil 3D နှင့် Land Development 2009 Software အားကျွမ်းကျင်စွာ � ...
•	ကား kilo များတွက်ချက် စာရင်းသွင်းရမည်။ •	ရုံ� ...
Date Posted: 15/6/2019
•	Responsible for HSE training programs and leadership programs •	Responsible for conducting safety,healthy and env ...
•	Drawing နှင့် Design ပိုင်းသိရှိပြီး Site Engineer နှင့် Sub Contr ...
•	Projectလုပ်ငန်းအပိုင်း နားလည်ပြီး Drawing, documentsများ � ...
•	အထပ်မြင့်(သို့)လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံးအား � ...
•	Design ပိုင်းအားဖတ်နိုင်ပြီး မိမိတာဝန်ယူသော � ...
•	Civil Work & Water Waste လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဘူးရမည်။ •	Const ...
•	Drawing နှင့် Design ပိုင်း သိရှိပြီး Site Engineer နှင့် Sub Cont ...
•	Develop, lead and execute purchasing strategies •	Track and report key functional metrics to reduce expenses and ...
•	Must have teamwork •	Must understand sales and Marketing Plan •	Can guide way plan to subordinates •	Must ...
•	Factory Expenses Data entry to Peachrteer software. •	Journal entries to Peachtree software. •	Calculation of ...
Date Posted: 27/4/2019